Muuqaallo Muujiyey Dalka Hubka Badan Siinaya Dowladda Itoobiya Oo la Shaaciyay.(Sawiro) AwdalMedia Awdal Media Muuqaallo Muujiyey Dalka Hubka Badan Siinaya Dowladda Itoobiya Oo la Shaaciyay.(Sawiro)
Sawirro lagu qaaday satellite-ka oo ay heshay Al-Jazeera ayaa shaaca ka qaaday in dowladda Imaaraadka Carabta ay taageero militari oo baaxad leh siineyso dowladda Ethiopia ee dagaalka kula jirta mucaaradka Tigray-ga.
Baarayaasha helay sawirrada ayaa isha ku hayey muddo saldhigyo ciidamada cirka ah oo ku yaalla Imaaraadka Carabta iyo Ethiopia, waxayna heleen caddeymaha in ka badan 90 duulimaad oo isaga kala gooshay saldhigga Sweihan ee Abu Dhabi iyo kan Harar Meda ee koonfurta magaalada Addis Ababa, intii u dhaxeysay September iyo October 2021.
Asalka duulimaadyada badankood ayaa la qariyey ama la geliyey diiwaanka duulimaadyo kale oo caadi ah oo aysan laheyn.
Dhaxal-sugaha Abu Dhabi, oo ah hoggaamiyaha dadban ee Imaaraadka Carabta Mohamed Bin Zayed, ayaa iska dhiga inuu yahay nabadeeyaha iyo dhex-dhexaadiyaha Geeska Afrika. Hase yeeshee shaac ka qaadistan ayaa tilmaameysa in Imaaraadka uu taageero xooggan ku siinayo Ethiopia dagaalka ay kula jirto Tigray-ga.
Arrintan ayaa imaneysa ayada oo dowladda Abiy ay bilihii tegay jab xooggan kala kulantay Tigray-ga oo hadda kusii siqaya caasimadda Addis Ababa, una jira wax ka yar 200 km.
Mid ka mid ah muuqaallada ay heshay Al-Jazeera oo laga qaaday saldhigga Ethiopia, ayaa muujinaya diyaarad u eg tan Shiinaha ay soo saaraan ee Drone-ka ah ee Wing Loong.
Boqortooyada Sacuudiga Oo Dalkeeda ka Mamnuucday 14 Dal Oo Afrikan ah.